Filazalazana vaovao manasongadina Mpikambana famoronana Keynote | NextMapping
Cheryl Cran - Hoavin'ny Expert amin'ny asa
Boky Cheryl Ankehitriny
Miala tsiny fa toa tsy manohana horonantsary HTML5 ny navigateur anao.
Ny ho avin'ny asa fitenin'ny Keynote
Cheryl Cran dia mpandahateny lehibe indrindra eran-tany izay voatondro ho # 1 ho avy amin'ny fitarihana asa. Ny mpanjifany dia mamaritra azy ho 'tsara indrindra' amin'ny fanomezana konteks sy vahaolana ho an'ny ho avy miova haingana amin'ny fomba famelabelaran-kevitra kabary sy fifanakalozan-kevitra.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpandahateny fanamafisam-peo manavao ny vehivavy indrindra, dia manome ny lanjan'ny mpitondra sy ekipa i Cran amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo hanova ny fomba fisainany avy amin'ny tsipika ho amin'ny famoronana ary mitondra ny fanavaozana ho an'ny tenany sy ho an'ny orinasany.
Ny fomba fiasan'i Cran amin'ny maha-fanavaozana, fitarihana ary famoronana lahateny fototra dia misy ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpihaino, ary ny fampidirana ireo angona ho keynote namboarina ary koa ny fifanakalozana fotoana tena izy mandritra ny fehezanteny.
Ireto ambany ireto ny safidin'ny kabary fototra natolotr'i Cheryl an'ireo mpanjifa manerantany - namboarina manokana ny keynote tsirairay avy ary afaka manambatra singa isaky ny keynote izy mba hamoronana fampisehoana tsy manam-paharoa ho an'ny hetsikao.
Fampahalalana misimisy kokoa ho an'ny Takelaka Fivoriana
Vakio ny fijoroana ho vavolombelona
Miresaka momba ny haino aman-jery
Fiovana fiovana ao amin'ny hoavy amin'ny hoavy Covid - Ahoana ny fomba hiatrehana ireo fanamby amin'ny olona ao anatin'ny zava-misy WFH
Manafaingana ny hoavin'ny asa tahaka ny fitomboan'ny asa avy amin'ny mpiasa an-trano sy ny fanamby tonga amin'ny asa lavitra.
"Ny hevitr'i Cheryl momba ny fikatsahana hahatakatra sy hahitana marimaritra iraisana amin'ny antony manelingelina antsika, fa tsy handrisika ny hiverenany sy ny hiadiana amin'ireny antony ireny, dia tena sarobidy sy ara-potoana ho an'ny indostrianay."
Manatrika fivoriana isan-taona
Fikambanan'ny Bankin'ny maso
Ny fandehanana any amin'ny manaraka ao amin'ny Post Covid-19 Zava-misy
Tsy nisy nanambara mialoha ny areti-mifindra maneran-tany tamin'ny 2020 dia hampiakatra ny fomba fiasantsika sy hivelomantsika.
"Tiako tokoa ilay rindrambaiko nampiasain'ny mpampita teny manan-danja - angamba ny traikefa virtoaly tsara indrindra hitako hatramin'izay (ary ny akaiky indrindra amin'ny traikefa ananan'ny olona)."
Tarika Virtual mitarika ao amin'ny toeram-piasana haingana haingana
Tao amin'ny 2020, ny orinasa dia voatery namerina haingana sy nanitsy ny fanakorontanana lehibe amin'ny aretin'ny valan'aretina
"Ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Cheryl dia mavitrika ary nanosika. Ny saina sy fisaintsainan'ny mpitarika dia hanampy ireo fikambanana, raha tsy mbola mampiasa ny modely izy ireo, dia hahomby kokoa amin'ny fananganana ekipa."
Ho avy ny hoavy
Ahoana ny fomba lavitra eto raha hijanona sy izay tokony hatao mba hahombiazana amin'ny ho avy
"Cheryl Cran no mpahay teninay ho an'ny hetsika fanaontsika isan-taona ary tamin'ny teny iray niavaka izy. Ny fomba fijerin'i Cheryl momba ny ho avin'ny asa sy ny zavatra ilain'ny orinasa eo amin'ny sisiny dia mitondra lanja lehibe ho an'ny vondrona misy antsika. Nandany fotoana izy nifampidinika tamin'ny tenako sy ny ekipan'ny mpitarika momba ny kolontsainay miavaka ary ny fomba hampanarahana izay efa nataontsika tsara.Ny mpitarika anay dia nanolotra rantsan-tanana roa ho an'ny fomba fanaterana an'i Cheryl izay haingana, mivantana ary mavitrika.Manampy izany, tena nankafizin'ireo mpitarika ny fisian'i Cheryl nanatevin-daharana anay ho an'ny fiaraha-monina ara-tsosialy.Ny zavatra hitako fa tena sarobidy tamin'ny naha-Tale Jeneralin'ny orinasa azy dia ny fanadihadiana talohan'ny hetsika izay nampidiriny tao amin'ny fehin-keviny ary koa ny tena fandatsaham-bato sy ny soratra izay tena nahalasa ny antokonay mpitarika. miresaka fotsiny ny ho avy sy ny fironana izay nomeny antsika tokoa ireo fitaovana fanovana mba hananganana ny fahombiazantsika manaraka. "
Ny ho avin'ny asa izao - vonona ve ianao?
Inona no hataon'ireo mpitarika sy ny ekipany mba hiroborobo anio ary mihoatra ny taona 2030?
"Cheryl no mendrika tanteraka amin'ny Fihaonamben'ny Fararano - manana vondrona mahay manaja ny mpitarika sendika izahay ary mirehareha amin'ny tenany ary eo am-pamolavolana sy i Cheryl dia nanamby azy ireo hieritreritra bebe kokoa amin'ny famoronana, hanitarana ny fomba fanavaozana ary koa ny: manangana paikady ho avy mifototra amin'ny zava-misy haingana amin'ny sehatry ny serivisy ara-bola. Izahay dia manome torohevitra be dia be ny Cheryl Cran ho lasa hoan'ireo manampahaizana miasa sy mpandahateny fototra. ”
Mpanatontosa ny Firaisambe Ara-bola ho an'ny Mpanatanteraka Fandraharahana MN
Ny fomba tsara indrindra hamoronana ny ho avy dia ny fanaovana sari-tanety azy
Vonona tanteraka ve ianao sy ny mpitarika anao amin'ny fomba ankamantatra amin'ny ho avy?
“Niara-niasa taminay i Cheryl tamin'ny fiverenan'ny tanàna voalohany. Nifantoka tamin'ireo lohahevitra lehibe momba ny fanavaozana sy fanovana mpitarika ny fisintomana. Nasainay hanatrika ny fialam-baravaranay ireo mpivarotra anatiny sy ivelany ho an'ny fikambanana. Ny fahaiza-manaon'i Cheryl dia mety ho hita amin'ny zava-drehetra ao anatin'izany ny mialoha ny fandaharam-potoana ny hetsika ary mandritra ny fitsangatsanganana andro sy sasany. Nandritra ny fitsangatsanganana, i Cheryl dia nahay nifamatotra ary nanampy ny mpitarika tsirairay hamantatra ny hoaviny ho an'ny tenany sy ny orinasa. ”
Ireo ekipa vonona amin'ny ho avy - ny fomba hamoronana ekipa marefo, zatra & havaozina
Miray hina amin'ny vina sy ny fifantohana ary ny tanjonao ve ny ekipanao?
Cheryl Cran dia tsy Sheryl Crow fa vato kintana tsy dia kely lavitra noho izany izy! Izahay dia nanana an'i Cheryl ho fitenenana am-baravarana ho an'ny fandaharan'asa ho an'ny ekipan'ny mpitarika anay. Cheryl dia niara-niasa taminay nandritra ny hetsika am-polony mahery izay natolony ho an'ireo mpitarika 6000 momba ny ekipa vonona ho avy. Ny fahaizany manantona ireo hafatry ny mpanolotra hafa, ny fahafahany mampiditra ireo vondrona miaraka amin'ny vazivazy, ny fahafinaretana, ny fahatokisana ary ny fisainana feno fihantsiana dia somary mahagaga fotsiny ary INDRINDRA izay ilaintsika ho akaikin'ny hetsika.
Ny ho avy hisarihana & mitazona talenta ambony
Tale Jeneraly National Agra Marketing
Ny zava-kanto mitarika fiovana - mitondra fiovana amin'ny tontolo haingana
Miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fiovàna isika ary Ianareo no mpanova!
Mila famaritana namboarina manokana ve?
Mifandraisa aminay aminay raha mila fanazavana momba ny fomba ahafahan'ny mpandahateny voalohany sy famoronana vaovao, Cheryl Cran afaka mamolavola fehin-kevitra ho an'ny hetsika manaraka.